Liposuction ဆိုတာ ?? | OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On Jul 8, 2019
Gym ကစား၊ diet လုပ်နေပေမဲ့ ဘယ်လိုဆော့ဆော့ ဘယ်လိုအစားရှောင်ရှောင်မရတဲ့ အမတစ်ယောက်က စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ဟိုတစ်လောကရောက်လာတယ် ..
“ညီမလေးရယ် အမတော့ ဒီတစ်သက် မပိန်တော့ဘူး ထင်ပါတယ်ဟယ်.. အရမ်းစိတ်ညစ်နေပြီ..”
“မဟုတ်ဘူးဟဲ့.. အမမှာဖြစ်နေတဲ့ အဆီနေရာတွေက ဆော့လို့လဲမကျတော့တဲ့ နေရာတွေ၊ မြန်မာဝတ်စုံတွေဝတ်ရင် အထစ်ထစ်နဲ့ အရမ်းရုပ်ဆိုးတာ..”
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဆီထူနေတယ် အဆီချရခက်နေတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် liposuction လို့ခေါ်တဲ့ အဆီစုပ်ထုတ်ခြင်း နည်းပညာအကြောင်းလေး ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
အလှပအတွက် အဖက်ဖက်က တိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်အရရော အကျိုးရှိတဲ့အဆီစုပ်ထုတ်ခြင်း နည်းပညာက ခေတ်စားလာခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေ ပုံမှန်ဝိတ်ချတယ်အစားနဲ့ လျှော့တယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုလျှော့လျှော့ အဆီမကျတဲ့ နေရာတွေရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ကတော့ လက်မောင်း၊ ဘော်လီဝတ်ရင် လက်မောင်းနဲ့ ရင်သားကြားမှာ ကျောအနောက်မှာ ထွက်နေတတ်တဲ့ အဆီစု၊ လိမ္မော်ခွံလို အထစ်ထစ်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ ပေါင်က cellulite လို့ခေါ်တဲ့ အဆီခဲပြင်၊ ဝမ်းဗိုက် ချက်အောက်ပိုင်း၊ ခြေသလုံးအဆီ၊ ဂုတ်သားနဲ့ လည်ပင်းအဆီတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွေ ဘယ်လိုချချမကျလို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့သူတွေ စစ်တမ်းကောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ လူ ၁၀၀ မှာ အယောက် ၈၇ ယောက်ရှိပါတယ်တဲ့။
“ဟိုတစ်လောက အမမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်.. အဆီစုပ်ထုပ်လို့ ရတယ်ဆို.. အဲ့ဒါဘာလဲဟင်?? ကြားတော့ကြားဖူးနေတယ်.. ဒါပေမဲ့သေချာမသိလို့..”
“ဟုတ်တာပေါ့.. အဆီစုပ်ထုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ နည်းပညာကို ညီမတောင် ဟိုနေ့ကပဲ သေချာလေ့လာထားတာ.. ပြောပြမယ်နော်..
– ဝလာတယ် အဆီစုလာတာနဲ့အမျှ အဆီဆဲလ်အရေတွက်နဲ့ အရွယ်စားကကြီးလာတယ်..
– ဗိုက်အောက်ပိုင်း၊ ချိုင်းနဲ့ bra bulge လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဘော်လီဝတ်ရင် အပေါ်မှာထွက်နေတတ်တဲ့ အဆီစုတွေက တစ်ခါရံမှာ ဘယ်လိုကစားကစား မကျတော့ဘူး.. ရုပ်ဆိုးတာပေါ့လေ..
– အဲ့လိုမလိုလားအပ်တဲ့ အဆီတွေစုပ်ထုပ်ဖို့အတွက် စုပ်ထုပ်မဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ ထုံဆေးသုံးပြီး cannula လို့ခေါ်တဲ့ လိပ်ပြာအပ်လေးကို အရေပြားကနေတစ်ဆင့် အဆီပြင်ထဲထိုးထည့်ပြီး အဆီစုပ်မဲ့ စက်ကလေးနဲ့ စုပ်ထုပ်လိုက်တာ..
– စုပ်ထုပ်တဲ့ နေရာမှာလည်း
ဆိုပြီး စက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးရှိသေးတယ်.. ဒါကတော့ကိုယ်သွားမဲ့ clinic ကဘယ်နည်းပညာသုံးမှာလဲ ကိုယ်ကရော ဘယ်ဟာကို ပိုကြိုက်လဲဆိုတာ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုပေါ့..
– ဒီဟာလေးက အသေးစား ( minor procedure) ပဲဖြစ်လို့ အမာရွတ်ကျန်ခဲ့မှာ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်မှာ စိတ်ပူဖို့ မလိုဘူးအမရဲ့
– ဒီ procedure လေးလုပ်မဲ့သူက medically & physically fit ဖြစ်ရပါမယ်။ သွေးကြဲဆေး မှီဝဲနေရတဲ့သူတွေနဲ့ သွေးမတိတ်တဲ့ရောဂါ၊ keloid လို့ခေါ်တဲ့ အသားတက်တတ်တဲ့သူတွေက ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မလုပ်ခင်မှာ ဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့ လိုတယ်.. အမမှာက ဒါတွေမရှိတော့ လုပ်ဖို့ ပိုလွယ်တာပေါ့
– တခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ကြီးကြီးမားမားမရှိလို့ အဆီပိုတွေအတွက် စိတ်ညစ်နေရတဲ့သူတွေအတွက် ဒီ liposuction နည်းပညာလေးက ခုကမ္ဘာမှာ အရမ်းခေတ်စားနေတာတဲ့..”
“ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ညီမလေးရယ်.. အမျိုးသားရော လုပ်လို့ရလား?? ”
“ရတာပေါ့ ကျားမမရွေးလှချင်ရင် လုပ်လို့ရတယ်”
“တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ် ညီမလေးရယ်ကျ ားကျားပါ တူတူလုပ်ဖို့ စွဲဆောင်လိုက်ဦးမယ်..”
ကဲ.. အဆီပိုတွေကို သဘာဝနည်းလမ်းနဲ့ ချရခက်လို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ဒီလိုနည်းလမ်းလေးတွေ ရှိသေးတယ်ဆိုတာ သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ်နော်